မင်္ဂလာပါဆရာမ – Pann Satt Lann Books
ပွင့်လင်းရိုးရှင်းတဲ့အတွေး၊ သမရိုးကျနဲ့မတူ ရဲဝံ့ကွဲပြားတဲ့ လူမှုရှုမြင်ချက်အတွေးစလေးတွေကို အရေးအသားကောင်းကောင်းနဲ့ ဆွဲမက်ဖွယ်တင်ပြနိုင်ပြီး စာဖတ်ပရိသတ်ရင်ထဲမှာ စာပေမှတ်တိုင်တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ မှတ်မှတ်သားသား စိုက်ထူထားနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ဆရာမ #မွန်ဟော်စီ ရဲ့ ပဉ္စမမြောက်စာအုပ်သစ်လေးဖြစ်ပြီး…
မင်္ဂလာပါဆရာမ (စာသင်ခန်းထဲက အတွေးစများ) ဆိုတဲ့စာအုပ်က ကလေးတွေအကြောင်း အဓိကရေးထားတဲ့ စာစုတွေပါ… ဒီစာအုပ်မှာ မိဘတွေရဲ့ ထိန်းကျောင်းသင်ပြမှု အရေးကြီးပုံတွေ..စိုးရိမ်ပူပန်မှူတွေ…. ဘိုကျောင်းနဲ့မြန်မာကျောင်းရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ … အမျိုးမျိုးသောသင်ယူမှုများအတွက် အဓိက သော့ချက်တွေ Multiple Intelligences / The Five Love Languages အရွယ်အလိုက် ပြောင်းလဲလာကြပုံတွေ….
လူငယ်တွေအတွက် သတိပြုစရာအချက်တွေ… လိင်မှုဆိုင်ရာ ပညာပေးမှုတွေ နဲ့ ကလေးသူငယ် အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုတွေ (Sex Education / Child Abuses) စတဲ့ လေ့လာသိမှတ်စရာ အကြောင်းအရာများပါသည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်…။
5.3 x 0.5 x 8.1 inches
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2021 အောက်တိုဘာလ (ဆဋ္ဌမ-ကြိမ်)
မင်္ဂလာပါဆရာမ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု 1 ရှိပါသည်။
Lain Lain – March 18, 2021
မိဘတွေ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ပါ
ကိုယ့် မိသားစု အခြေနေလေးနဲ့ ဘယ်လိုကျောင်းမျိုးထားမလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးကောင်းလေးတွေပေးနိုင်ပါတယ်